एमटियुको सदस्य बन्नु गर्वको कुरा हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ « Sansar News
एमटियुको सदस्य बन्नु गर्वको कुरा हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १७:२१
मजदुरहरुले संघर्ष द्वारा प्राप्त गरेका ३ अधिकार छन ती हुन :
(१)संगठित हुने अधिकार
(२) माग राखी कम्पनीसंग बार्ता गर्ने
(३) माग पूरा गराउन हडताल गर्ने अधिकार
यी अधिकारहरुले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ। यी मजदुर अधिकार हरु धेरै देशको संविधानमा सुनिश्चित छन। कोरियाको कानुनको धारा ३३ यानी कि कोरियाको मजदुर कानुन र संयुक्त रास्ट्रसंघले (UN )१९४८ डिसेम्बर १० मा गरेको मानवअधिकार घोषणा पत्रको धारा २५ को उपधारा ४ मा सबै मानिस (मजदुर) आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि मजदुर युनियन गठन र सदस्यता लिनपाउने छन भनी तोकिएको छ। सबै किसीमको जातीय (नस्लबाद ) भेदभाव निर्मुल गर्ने सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको धारा ५(E) १ मा काम,पेशा छनौटको स्वतन्त्रता,निस्पक्ष र उचित काम गर्ने शर्त, बेरोजगारबाट रक्षा, समान काम समान ज्याला, मजदुर संगठनको गठन र सदस्य बन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। ILO को स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारको रक्षा सम्बन्धि कन्भेन्सन ८७ र मजदुर युनियनको गठन लगायत बार्ता गर्ने अधिकार सम्बन्धि कन्भेन्सन ९८ मा मजदुरका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
माथी उल्लेख गरिएका सबै अधिकारहरु प्रवासी मजदुरलाई समान रुपमा लागु हुनेछन। तर हामी प्रवासी मजदुरको अवस्था केछ त कोरिया मा ? के हामीले माथी उल्लेखित अधिकार उपयोग गर्न पाएका छौ त ? हाम्रो मजदुरी जीवन सुखमय छ त ? कोरियन सरकारले हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुरको रुपमा लिएको छ त ? पक्कै पनि हामीले हाम्रो हक अधिकारहरु प्राप्त गरेका छैनौ। यी हक अधिकारहरुलाई प्राप्त गर्न संगठित हुने ठाउँ हो प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) कोरियामा प्रवासी मजदुरले १९९४ मा औद्योगिक दुर्घटना बिमा सबै प्रवासी मजदुरले पाउनु पर्ने माग राखी धर्ना दिई आन्दोलन गरेको थियो।
यहि आन्दोलन नै प्रवासी मजदुरले कोरियामा गरेको पहिलो आन्दोलन हो। यसपछि औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरि कार्य भिसाप्रणाली लागू हुनुपर्छ भनी विभिन्न आन्दोलन गरिएका छन। २००३ मा बिना भिसामा काम गरिरहेका प्रवासी मजदुरलाई भिसा दिनुपर्ने, धरपकड बन्द गर्नुपर्ने, डब्लुपियस लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रवासी मजदुरले सौल म्यङ्दोङमा ३८१ दिन धर्ना बसेका थिए। यसपछि कोरियामा प्रवासी मजदुर संगठित भइ सरकार र कम्पनी मालिकसंग आफ्नो माग राखी संघर्ष गर्न स्वतन्त्र प्रवासी मजदुरको मजदुर संगठनको आवस्यकता महसुस गरि गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
धर्नामा सहभागी मजदुरको नेतृत्वमा सन २००५ अप्रील २४ तारिक प्रवासी मजदुर युनियनको गठन गरिएको थियो। यो प्रवासी मजदुर युनियन प्रवासी मजदुर स्वयमले स्वतन्त्र रुपमा प्रवासी मजदुरका मजदुर ३ अधिकार प्राप्त गर्न गठन गरिएको विश्वको पहिलो प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) हो। एमटियु गठन भएको १० बर्षपश्चात् कोरियन सरकारबाट मान्यता प्राप्त भई सौल क्षेत्रीय श्रम विभागमा दर्ता भएको छ। प्रवासी मजदुर स्वयम्ले गठन गरि संबंधित देशको सरकारबाट कानुनीमान्यता प्राप्त गरि दर्ता भएको विश्वको पहिलो प्रवासी मजदुर युनियन पनि एमटियु नै हो।
यो प्रवासी मजदुर युनियनमा कोरियामा रहेका सम्पुर्ण प्रवासी मजदुर सदस्य,पदाधिकारी बन्न सक्ने छन। कोरियन नागरिक सदस्य, पदाधिकारी बन्न पाउने छैन। एमटियुको सदस्य स्वयमले निर्वाचनद्वारा पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्था छ। एमटियु सदस्यको सदस्यता सुल्क र आर्थिक सहयोग कार्यक्रमबाट संकलित रकमबाट संचालन भैरहेको छ। कोरियामा प्रवासी मजदुरको संख्या बढिराखेको छ। त्यसको तुलनामा प्रवासि मजदुरको हक अधिकार अझै पनि सुनिश्चित नभएको अवस्था छ। प्रवासी मजदुरलाई गरिने शोषण, दमन र भेदभाव जारी छ।
काम गर्ने अवस्था अति नाजुक छ। कम्पनी परिवर्तन गर्न नदिई कुटपिट गर्ने, जवर्जस्ती काम गर्नु पर्ने, तलव नपाउने, थैजुकम नपाउने समस्याहरु प्रवासी मजदुरले भोगिरहेका छन। बिरामी हुँदा आराम गर्न र उपचार गर्न नपाईरहेको अवस्था छ। कम्पनीले गर्ने यस्तो व्यबहारमा कुनै सुधार आउने सम्भावना छैन।
यस्को मुख्य कारण प्रवासी मजदुरले कम्पनी स्वइच्छाले परिवर्तन गर्न नपाउन, सबै अधिकार कम्पनी मालिकलाई हुनु हो। प्रवासी मजदुरहरुले कम्पनी र सरकारलाई आफ्नो कानुनले ताकेको आधारभुत अधिकारहरुलाई मान्यता दिनको लागि बाध्य गराउन साथै प्रवासी मजदुरको अस्तित्व कायम राख्नको लागि प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) स्थापना गरिएको हो।
प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) क्षेत्रीय मजदुर युनियन हो। यसका सउल ख्यङगी इन्छन क्षेत्रमा ८ ओटा साखा छन।
(उइजङ्बु, सउल , खिम्पो, इन्छन,आन्सान,सुवन,ओसान फ्यङ्थेक शाखा) तर कोरिया अधिराज्य भरि काम गर्ने प्रवासी मजदुरहरु एमटियुको सदस्य बन्न पाउनेछन। महिनामा एक पटक शाखाको बैठक बस्ने छ भने प्रत्येक बर्ष साधारण सभा हुने छ। साधारण सभाबाट बार्षिक गतिविधि को मुल्याङकन र भाबी कार्यक्रमहरु पारित गरि गतिविधि गरिने छ। एमटियुले प्रवासी मजदुरलाई कम्पनीमा परेको समस्या समाधानको लागि वकिल मार्फत समाधान गर्न सहयोग गरिरहेको छ। प्रत्येक बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस (मेडे), अगस्ट महिनामा इपियस खारेज, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी मजदुर दिवसका अवसरमा प्रवासी मजदुर संगठित भएर आफ्नो हक अधिकारको बारेमा माग राखी सरकार लाई माग पुरा गराउन दवाब दिदै आइरहेको छ। केसिटियु लगायत अन्य विभिन्न प्रवासी मानवअधिकार संघ संस्था सग एक्यवद्धता गर्दै प्रवासी मजदुरको हक अधिकार भन्दा कम्पनी मालिकको अधिकारलाई प्राथमिकता दिई बनाएको रोजगार अनुमती प्रणाली खारेजिको लागी संघर्ष गरिरहेको छ।
प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) ले कोरियन सरकार सामु राख्दै आएको मुख्य मागहरु साथै संघर्षका लक्ष्य :
१) प्रवासी मजदुर अधिकार हनन गर्ने इपियस खारेज (कोरियामा प्रवासी मजदुरलाई नियन्त्रण गर्न लागुहुने इपियस कानुनको मात्र खारेजी हुनुपर्ने, प्रवासी मजदुर छनौट प्रक्रिया भाषा परिक्षा रहने गरि)
२) सबै अधिकार प्रवासी मजदुरलाई (स्वतन्त्र रूपमा कम्पनी परिवर्तन गर्ने लगायत) सुनिश्चित भएको कार्य भिषा प्रणाली (ड्ब्लुपियस) लागू हुनुपर्ने ।
३) मजदुरका ३ अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
४) थ्यैजिकम कोरियामै पाउनुपर्ने।
५) कृषि क्षेत्र को मजदुरलाई भेदभाव गर्ने मजदुर कानुनको धारा ६३ खारेज हुनुपर्ने ।
८) प्रवासी मजदुरलाई गरिने सबै भेदभाव बन्द हुनुपर्ने ।
९) प्रवासी महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
प्रवासी मजदुर आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि एकजुट भएर दबाव शृजना गरौ ।
(लेखक : एमटियुका महासचिव हुन् )